Volam-bahoaka: mitaky ny mangarahara ny firaisamonim-pirenena | NewsMada
Volam-bahoaka: mitaky ny mangarahara ny firaisamonim-pirenena
Nanao fanambarana iombonana ny Unicef, ny Msis Tatao, ny CCOC, ny Trans­parency International Initia­tive Madagascar, mitaky ny mangarahara momba ny tetibola sy ny fampiasana azy. Ny valanaretina Covid-19 ankehitriny, ahafahan’ny firenena manatsara ny fitantanana ny tetibola. Midika ho fahafahan’ny olom-pirenena ny mahazo antontam-baovao ara-potoana, mazava, ary mandavantaona. Singa iray lehibe amin’ny fahaiza-mitantana matotra ary antoka ho an’ny fampandrosoana tsy miangatra ny fanatanterahana izany, ahafahana miady amin’ny fahantrana.
Ny taona 2019, anisan’ireo 117 nanatanterahana tombana ny fangaraharahana momba ny tetibola i Madagasikara, araka ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny fitantanana ny volam-bahoaka (Open Budget Survey). Nahazo ny fanohanan’ny Unicef izany. Na izany aza, ilaina ny manamarika fa ny valin’ny fanadihadiana ny taona 2019, miorina amin’ny fepetra mandrakotra ny va­nim-potoana 2017-2018.
Fehin-kevitra lehibe noraisina tamin’ny 2019: nihatsara kely ny famokarana antontam-baovao, 40/100 ho an’ny va­nim-potoana 2017-2018, raha toa ka 36/100 ny tamin’ny taona 2015-2016; nihemotra kosa ny fandraisana anjaran’ny vahoaka sy ny olom-pirenena amin’ny fizotran’ny asa mikasika ny tetibolam-panjakana. Nihatsara ny fanaraha-maso ataon’ireo Andrimpanjakana miandriakitra izany satria 35/100 ny taona 2017-2018 raha toa ka 28/100 ny taona 2015-2016.